EVY's Kitchen: ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (Tag post)
ဒီဇင်ဘာ ပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (Tag post)
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါလို့ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ပျော်စရာလေးတွေကြုံတာနဲ့ ပို့စ်လေးသပ်သပ်ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးတုန်းမှာ ညီမ ရို့စ်က တဂ်လာတဲ့အတွက် အချိန်ကိုက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်။
တနှစ်တာ ကာလလုံးမှာ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးက ဆောင်းတွင်းတွေပါ။ နွေမှာ ဆိုသိပ်ပူသလို မိုးတွင်းစိုစိုစွတ်စွတ်နဲ့ ကျောင်းသွားရတာကို အတော်မုန်းဖူးပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းရောက်လို့ ချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့ မနက်စောစောလမ်းလျောက်ရတာဟာ ကျွန်မအနှစ်သက်ဆုံးအရာများထဲက တစ်ခုပါ။ ရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲတာနဲ့ အတူမတူတဲ့တဲ အ၀တ်အထည်တွေ ရာသီအလိုက်ဝတ်ရတာတွေကိုလည်း အရမ်းနှစ်သက်ခဲ့တာပေါ့။ ခုလောလောဆယ်တော့ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ မရှိတဲ့နေရာမှာ ရောက်နေတာကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဇင်ဘာရောက်လာရင် လူကအလိုလိုကို ပျော်နေတာပါပဲ။ ခရစ်စမတ် သီချင်းတွေနားထောင်ရတာလဲ မြူးမြူးရွှင်ရွှင်နဲ့ စိတ်ကို ကြည်နူးစေတယ်လို့ ထင်မိပြန်ရော။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အိမ်ကို သီချင်းလာဆိုကြရင် တော်တော်ပျော်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုတော့ အဲလိုမျိုးလေးတွေ နားမထောင်ရတာတောင် ကြာနေပြီ။ ဟိုးတုန်းက အဖေ၊ အမေနဲ့ အတူ ဆေးရုံမိသားစု ခရစ်စမတ်ဒင်နာတွေလိုက်တက်ရတာဟာလည်း ပျော်စရာအမှတ်တရလေးတွေထဲက တစ်ခုပေါ့။
တကယ်တမ်းတော့ ဒီဇင်ဘာမှာ ကျွန်မအတွက် အမှတ်တရတွေများတဲ့လလို့ ဆိုရပါမယ်။ ကျွန်မရဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့ကလည်း ဒီဇင်ဘာမှာ ဖြစ်သလို ကျွန်မတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ဟာလည်း ဒီဇင်ဘာမှာပါဘဲ။ ဒီနှစ်တော့ ဗမာပြည်ကိုလည်း ပြန်ဖြစ်သွားတော့ အမှတ်တရလေးတွေပိုများသွားလို့ ကျွန်မအတွက် မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလို့ပြောချင်တယ်။ မိဘတွေနဲ့ အတူမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ဆုံခွင့်ရခဲ့သလိုပဲ ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲက ခင်မင်ရင်းနှီးလာတဲ့ အိမ်ရှင်မလက်ရာက ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ ဟင်းချက်ညီအစ်မတွေနဲ့ အပြင်မှာဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါ့အပြင် မနော်ဖောလည်း စင်္ကာပူရောက်တုန်းသတိတရဆက်သွယ်လာလို့ အရမ်းဝမ်းသာရပါတယ်။ ဒါလေးတွေက လက်ရှိကျွန်မအတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေပေါ့။
ရို့စ်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်....
အလှဆင်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်ဆင်လေ့တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရစ်စမတ်နားနီးရင် အလှထားတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေ စိတ်ကူးပေါက်သလို ၀ယ်လေ့ရှိတယ်
အင်း....ရွေးချယ်ခွင့်သာရှိမယ်ဆိုရင် ဒီဇင်ဘာကိုနှင်းတွေရှိတဲ့ နေရာမှာနေချင်တယ်။ နှင်းတွေနဲ့မှ ခရစ်စမတ်က ပိုအသက်ဝင်မယ်ထင်လို့။ ဒါပေမယ့် နှင်းကျုံးရမှာတော့ ကြောက်သား။
အဲလိုမျိုးနေ့မျိုးကို သူငယ်ချင်းတွေအိမ်သွားလည် ချင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖုတ်တဲ့ မုန့်တွေလက်ဆောင်ပေးချင်တယ် (ဒီနှစ်တောင် ဖိတ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ် ၁ အိမ်သွားစရာရှိတယ် :-) )
ခရစ်စမတ်နီးလာတိုင်းပျော်တာပါဘဲ။ ၁ နှစ်တော့ မှတ်မှတ်ရရရှိဘူးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမကြီး အိမ်မှာ ဆရာမဦးဆောင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂိမ်းတွေကစားကြပြီး ခရစ်စမတ်ပါတီလုပ်ကြတာ ပျော်မဆုံးဘူး။ ၁၀တန်း အောင်ပြီးကာစ နှစ်လို့မှတ်မိလိုက်တယ်။ ဆရာမကဘိုကပြားဆိုတော့ ၀ိုင်တွေဘာတွေကို သူကိုယ်တိုင်လုပ်တာ။ အဲဒါအပြင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေနဲ့လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးနေလေ့ရှိတယ်။ ခုတော့ ဆရာမလဲမရှိတော့ပါဘူး။
ချစ်တဲ့ မိသားစုဝင် အားလုံးနဲ့ အတူတူပေါ့
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ countdown လုပ်ရတာကို စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ သူများတွေအော်နေသံကြားရင် ပျော်နေတာပဲ။ ကြီးလာတော့ ကိုယ်နဲ့ သိပ်မဆိုင်သလိုပဲ။ စောစောအိပ်ဖြစ်သွားတာ ၃ ၊ ၄ နှစ်ရှိပြီ။ နိုးလာတော့ နှစ်ကူးနေပြီ
ရှိပါဘူး။ အလည်အပတ်ကတော့ ကြုံသလိုသွားတာပါဘဲ
အချိန်တွေကုန်တာ မြန်လွန်းတယ်၊ အသက်ကြီးတာ မြန်လိုက်တာဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးတော့ ရှိတယ်။
ကဲရို့စ်ရေ ခရစ်စမတ်အမီ ရေးလိုက်ပါပြီနော်။ ဘလော့ လာလည်သူများကိုလည်း ပျော်စရာပိတ်ရက်များဖြစ်ပါစေလို့ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Christian သူငယ်ချင်းများကိုလည်း Merry Christmas 2011 ပါလို့ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်။ နောက်ပို့စ်တစ်ခုမှဘဲ ဗမာပြည်က စားစရာတွေနဲ့ နှိပ်စက်ပါ့မယ် :P. ဒီနှစ် နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်မှာတော့ မုန့်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ကြံစည်ထားပါတယ်
So, you haveamemorable December because of your hubby's birthday and anniversary :). Thanks so much for writing the tagged post. It's interesting. Looking foward to see photo of Burmese food :D.
ပျော်စရာခရစ္စမတ်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေနော်။ အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ စတင်နိုင်တဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင်.
ပျော်စရာဒီဇင်ဘာလေးပိုင်ဆုိုင်ခွင့်ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ် အက်ဗီရေ။
နောက်ပို့ စ်လေးနဲ့ အနှိပ်စက်ခံချင်လိုက်တာ။း))
Christmas Fruit Cake ( ခရစ်စမတ် လက်ဆောင်)